Amanqaku kaLance Weatherby Martech Zone |
Amanqaku ngu NgeLance Weatherby
U-Lance Weatherby nguSekela Mongameli weNtengiso kunye neNtengiso e IfowuniRail. Unomdla wokwakha iinkampani ezijolise kubathengi kwi-Intanethi kunye nengxelo eqinisekisiweyo yempumelelo. Usebenze njengeCatalyst Startup kunye neZiko loPhuculo lweTekhnoloji ePhambili eGeorgia Tech kwaye ubambe uphuhliso lweshishini oluphezulu, ukuthengisa kunye nezikhundla zolawulo ngokubanzi kwiNCrowd, CipherTrust, EarthLink, nakwiMindSpring.
NgoLwesine, Julayi 9, 2015 NgoLwesihlanu, Meyi 21, 2021 NgeLance Weatherby
Ukulandelela umnxeba yitekhnoloji esekwe okwangoku eqhubeka kwakhona. Ngokunyuka kwee-smartphones kunye nomthengi omtsha weselfowuni, ukucofa-ekunokufowunela amandla kuya kusiba nomtsalane ngakumbi kwintengiso yanamhlanje. Olu thando luyinxalenye yento eqhuba ukonyuka kwe-16% ngaphezulu konyaka-kwiifowuni ezingenayo kumashishini. Kodwa ngaphandle kokunyuka kweefowuni kunye nentengiso ephathekayo, uninzi lwabathengisi kusafuneka lutsibe ekulandeleleni umnxeba iqhinga lokuthengisa elisebenzayo kwaye bakwi